Mbatata pancake yakakanyiwa nenyama - Recipe | Recipe
Mbatatisi Pancake yakakanyiwa nenyama
Alicia tomero | 25/10/2021 17:21 | Yakagadziridzwa ku 25/10/2021 17:25 | Recipes, Kunakidzwa Mapoka
Kana iwe uchida maresiphi akasiyana, heino chirevo chinoshamisa chekugovana neshamwari uye mhuri. Ndiyo imwe nzira yekubika, kwatichaita poda yembatata uye nyama minced inozadza, iyo ichaita kuti pancake inonaka iumbwe.
Kana iwe uchida aya mabikirwo nekuzadza iwe unogona zvakare kuedza yedu Lasagna nenyama nemiriwo.
munyori: Alicia tomero
Nguva yekugadzirira: 60 M
Nguva yakazara: 1 h 50 min
Zvisungo zvepakeke yembatatisi
700 g mbatatisi
Inenge 180 g yeupfu hwegorosi
400 g yemombe yemombe
Chipunu cheparsley yakachekwa
5 zvisikwa zvechizi
140 g ye grated chizi
Tinocheka onion muzvidimbu zviduku uye tinobvisa garlic uye tinoicheka kuita zvidimbu zviduku.
Tinoisa mupani yekupisa a jet yemafuta omuorivhi. Kana kwapisa, suka hanyanisi negariki wosiya ipfave.
Tinowedzera minced nyama, wedzera munyu nemhiripiri uye rega zvitonhore nehanyanisi. Isu tinoisiya ikaita shava kunenge kumagumo. teaspoon yepaprika.
Tinosvuura mbatatisi uye uzvicheke kuita zvidimbu zviduku. Tinoaisa mupoto ine mvura ndokuisa kuti afashaire nemunyu mushoma.
Kana dzaibva tinovabvisa uye tinoaisa mundiro.
Nekubatsira kweforogo tinovapwanya uye gadzirisa nemunyu uye mhiripiri. Tinowedzera zai uye chipunu cheparsley yakagurwa.
Tiri kuwedzera hupfu zvishoma nezvishoma uye isu tinoumba chidimbu uye chakatsetseka mukanyiwa. Isu tinoparadzanisa mukanyiwa muzvikamu zviviri uye fomu mabhora maviri.
Isu tinoputira bhora rehupfu kuti uite keke rakaenzana ndeipi pani yatichashandisa.
Tinoisa mukanyiwa mupani, kuwedzera zvimedu zvechizi, isa nyama yakakanyiwa pamusoro uye uvhare nayo grated chizi.
Neimwe bhora rehupfu tinoita zvakafanana nenhanho yapfuura. Tinotambanudza uye tinoigadzira kuita keke, iyo inenge yakaenzana neyokutanga. Tinoisa pamusoro uye tinya micheto neminwe yedu kuitira kuti ivhare uye igare yakavharwa. Tinozvirega zvitsvukire Maminitsi gumi pamusoro pemoto wakadzika kune rumwe rutivi. Ipapo isu tinoigochera kune rumwe rutivi, tichiishandura senge omelet. Pancake yedu yakagadzirira uye tichashumira ichipisa kumativi ose maviri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudzokorora » Recipes » Mbatatisi Pancake yakakanyiwa nenyama
Nyore kupfupisa paste
Pasita ine bhinzi yakasvibirira, mbatatisi uye lettuce pesto